Izikolo ezivalwayo: Isishwankathelo seengongoma eziphambili | Western Cape Education Department
Izikolo ezivalwayo: Isishwankathelo seengongoma eziphambili
Injongo yokuvalwa kwezikolo kukuphucula amathuba abafundi ngokuthi bafakwe kwizikolo ezinezibonelelo ezibhetele ukwenzela ukubabonelela ngemfundo esemgangathweni.
Ekuqaleni konyaka wesikolo ka-2012, iSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) laphawula izikolo eziyi-27 ukuba bezingezinako na ukuvalwa. ISebe i-WCED lacebisa ukuba uMphathiswa weMfundo wePhondo athathele ingqalelo oku kuvalwa kwezikolo kungenzeka ekupheleni kuka-2012.
UMphathiswa Grant, njengoMphathiswa weMfundo wePhondo, wazamkela ezi ngcebiso waza waqalisa inkqubo yokuvala izikolo ecaciswe kwisiqendu 33 soMthetho weZikolo zaseMzantsi Afrika. Le nkqubo ifuna uMphathiswa weMfundo wePhondo enze oku kulandelayo phambi kokuba asivale isikolo sikarhulumente:
Azise ibhunga lolawulo lesikolo ukuba unenjongo yokusiqwalaselela ukusivala isikolo yaye anike izizathu zoko
Anike ibhunga lolawulo lesikolo ithuba lokuvakalisa izimvo zalo malunga nokuvalwa kwesikolo okunokwenzeka
Abambe iintlanganiso ezivuleleke kuluntu zokuvakalisa izimvo (public hearing) kwakuba kunikwe isaziso esifanelekileyo apho abahlali bavulelekileyo ukuba bavakalise izimvo zabo ngokumalunga nokuvalwa kwesikolo okunokwenzeka
Aqwalasele ngenyameko enkulu zonke izimvo ezivakalisiweyo
UMphathiswa Grant uyilandele le nkqubo waza wayithobela yonke imigaqo echaphazelekayo yoMthetho we-Promotion of Administrative Justice Act phambi kokwenza isigqibo sakhe sokugqibela kwimeko nganye.
UMphathiswa Grant ude wenza nangaphezu kweemfuno ezimiselweyo zenkqubo yothatho-nxaxheba luluntu (prescribed public participation process) waza wacela nabani na onoluvo ngokuvalwa kwezikolo okunokwenzeka ukuba avakalise izimvo zakho kuye.
Okubandakanywe kwizimvo ezifikileyo zezinye zezimvo zawo omabini amacala, ezo zikuxhasa ngamandla nezo zikuchasa ngamandla kakhulu ukuvalwa kwezikolo ezithile. UMphathiswa Grant uziqwalasele ngenyameko enkulu ezi zimvo waza wazisebenzisa ekwenzeni izigqibo zakhe zokugqibela apho ezo zimvo zixhasa okulungiselela iimfuno zabafundi ngeyona ndlela ibhetele.
Emva kokuqwalasela uluvo ngalunye oluvakaliswe kuye, uMphathiswa Grant wenze isigqibo sokuba azivale izikolo eziyi-20 kweziyi-27. Isigqibo ngasinye esenziwe nguMphathiswa Grant senziwe ngenyameko enkulu, yaye sixhaswe zizizathu ezivakalayo yaye ekugqibeleni sikhokelwe kukuba yintoni na elungiselela abafundi ngeyona ndlela ibhetele.
Okubandakanywe apha ngezantsi sisishwankathelo sezigqibo ezenziwe nguMphathiswa Grant ngokumalunga noku.
Kwizikolo eziyi-20 eziya kuvalwa, eziyi-16 zikwizithili zemfundo ezisemaphandleni yaye ezine (4) zikwizithili zemfundo ezisezidolophini.
Izikolo eziyi-15 (75%) zizikolo zasezifama ezincinci kwizithili zemfundo ezisemaphandleni ezinamanani obhaliso abafundi aqalela ku-7 ukuya ku-87, nezimanani obhaliso angumndilili ongu-41.
Izikolo kwizithili zemfundo ezisemaphandleni: Abafundi kwizikolo ezisemaphandleni badla ngokufakwa kwiiklasi ezinamabakala amaninzi (multi-grade classes) ezinabantwana abakumabakala amaninzi eklasini enye. ISebe iWCED lenza izicwangciso zokubafaka aba bafundi kwizikolo apho abafundi bebakala elinye bafundiselwa eklasini yabo, apho kukho iifasilithi ezibhetele, imisebenzi eyenziwa emva kweyokufundisa nemidlalo yamaqela, nakwizikolo ezibonelela ngamathuba abhetele okuphuhlisa ulwazi lokufunda nokubhala nolwazi lokubala.
Izikolo kwizithili zemfundo ezisezidolophini: Kwizikolo ezine (4) kwizithili ezisezidolophini eziya kuvalwa, ezi-3 zizikolo eziziiprayimari size esinye ibe sisikolo esiphakamileyo. Izikolo eziziprayimari zibenengxaki yokuhla kwamanani abafundi apho abafundi banako ukuya kwizikolo ezikufutshane. Izikolo abafakwe kuzo zibonelela ngeefasilithi ezibhetele yaye zineziphumo ezibhetele kulwazi lokufunda nokubhala nolwazi lokubala. Isikolo esiphakamileyo sonakaliswe kakhulu yaye asisafanelanga bafundi. Oku kuchaphazela ukubanako kwesikolo ukugcina abafundi beqhubeka nokufunda. Isikolo esamkela abafundi sinako ukubanika indawo yokufundela abafundi kwiifasilithi ezibhetele nezikhuselekileyo yaye sibanika amathuba amahle nangakumbi empumelelo.
Ukufakwa kwabafundi ezikolweni
UMphathiswa Grant ugxininise ukuba abazali babafundi ezikolweni eziza kuvalwa mabangabi naxhala ngokubhalisa abantwana babo ukulungiselela unyaka wokufunda ka-2013. ISebe iWCED njengangoku lisebenzisana nezikolo ezichaphazelekayo ukuba zifake abantwana babo.
Imiba ebalulekileyo yesi sicwangciso ibandakanya oku kulandelayo:
ISebe iWCED liyabahlonipha abaqeshwa abafundisayo nabakulawulo yaye liyayenza imisebenzi yalo ngokumalunga nabo. Apho uMphathiswa weMfundo wePhondo evale isikolo, iSebe i-WCED, lakuba lithetha-thethene nabachaphazelekayo, lenza amalungiselelo afanelekileyo nanini na apho kunokwenzeka, abo bonke ootitshala nabasebenzi abanika inkxaso abaqeshwe liSebe iWCED. Abaqeshwa beSebe iWCED baya kulandela ngokwesiqhelo abafundi abachaphazelekayo. Apho kungenakwenzeka oku, nokuba kungasiphi na isizathu, iSebe iWCED liya kwenza amalungiselelo angamanye kwabo baqeshwa bachaphazelekayo.
Apho ngethuba lenkqubo yothatho-nxaxheba abahlali bavakalise inkxalabo yabo malunga nokhuseleko lwabafundi kwiindawo ezinobundlobongela bemigewu obukwinqanaba eliphezulu kunye/okanye nokhuseleko lwabafundi ngokumalunga neendlela eziyingozi, uMphathiswa Grant uyiqaphele le nkxalabo yaye uya kuziphakamisa koogxa bakhe abakwi-Ministry of Community Safety nakwi-Ministry of Transport and Public Works ukujonga ukuba kungenziwa ntoni na ukulungisa le meko.
Apho kuyimfuneko yaye kunokwenzeka, iSebe iWCED liya kubonelela ngoku kulandelayo kubafundi apho abafundi kufuneka baye kwisikolo esitsha:
Uthutho lwabafundi kulandelwa imiqathango yomgaqo-nkqubo okhoyo weSebe iWCED
Ukubonelelwa ngokutya kwabantwana esikolweni
Apho kuyimfuneko yaye kunokwenzeka, iSebe iWCED liya kuzihlawula iindleko zeefizi zesikolo ezihlawulwa ngonyaka wesikolo ka-2013 zabafundi ekufuneka baphume kwisikolo esingabizi zifizi baye kwisikolo esibiza iifizi okanye isikolo ekuya kuhlawulwa kuso iifizi ezingaphezulu. Apho kuyimfuneko, iSebe iWCED nalo liya kuncedisa abazali ukuba bafake isicelo sokuxolelwa ekuhlawuleni iifizi kwiminyaka ezayo.
Sikhuthaza ngamandla umzali okanye umhlali ngamnye ochaphazelekayo ukuba afunde isicwangciso sesikolo sabo ezichaphazelekayo ngenyameko ukwenzela ukuba bakuqonde ngokupheleyo ukuba oku kuya kuba yinzuzo njani na kumntwana okanye kubantwana babo.
Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, kwenziwe iinzame zokusebenzisa lo mba ngeenjongo zokuzuza udumo olukhawulezayo kwezopolitiko ngendlela ephuthileyo. Ezi ngongoma zicacile yaye ziyazithethela zona ngokwazo. Ukuvalwa kwezikolo asinto intsha eNtshona Koloni. Amasebe ephondo kwilizwe liphela avale amawaka-waka ezikolo zikarhulumente kude kuze kuthi ga ngoku, yaye uninzi lwazo lwachaphazeleka abantwana babahlali abangabona bathwaxwa yintlupheko mpela.
Ukuphucula amathuba abafundi akudibananga nokuwina iivoti - kumalunga nezo zinto zilungiselela abantwana bethu ngeyona ndlela ibhetele ukwenzela ukuba siphucule amathuba okuphila obomi babo. Kumalunga nokubeka phambili iimfuno zabafundi, kungekuko ukungazikhathaleli. Kumalunga nokudala amathuba, hayi ukuwathintela.
Ukuvalwa kwezikolo zizinto ezenzeka qho ngonyaka kweli lizwe liphela nakumazwe ngamazwe. Kuyinxalenye yaso nasiphi na isicwangciso sesebe lemfundo lephondo xa lihlolisisa kwakhona yaye liphonononga ubukhulu, imilo neemfuno zenkqubo yezemfundo.
Iingcali zemfundo ezininzi zingakungqina ukuba ukuvalwa kwesikolo ngamanye amaxesha kulinyathelo eliyimfuneko ekuphuculeni inkqubo yezemfundo. Xa kuthethwa ngolu hlobo, iingcali ezininzi zingangqina nazo ukuba isigqibo sokuvala isikolo kufanele senziwe ngenyameko enkulu, kuthathelwa ingqalelo nayiphi na imeko enokubakho, yaye kuphela emva kokulandela inkqubo efanelekileyo - inkqubo eyaqulunqwa yaza yaphunyezwa ngurhulumnete kazwelonke.
UMphathiswa Grant ulandele inkqubo esemthethweni nexhaswa zizizathu zezemfundo ezivakalayo ekwenzeni izigqibo zakhe zokugqibela. Uqinisekile ukuba izigqibo zakhe zokugqibela ziya kuphucula amathuba abafundi abachaphazelekayo.